10 ခရီးသွားနေစဉ်ငွေကို Save ရန်သိကောင်းစရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 ခရီးသွားနေစဉ်ငွေကို Save ရန်သိကောင်းစရာများ
အဘယ်သူသည်လာသောအခါဖြစ်နိုင်သမျှပိုက်ဆံကယ်တင်လိုပါဘူး? ခရီးသွားလာ စျေးကြီးရှိနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့် Save ကိုတစ်ဦးကရထားနှင့်သင်၏ရထားလက်မှတ်ဝယ်ယူအားဖြင့်၎င်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူအညီဖြင့်စီစဉ်, သငျသညျကုန်ကျစရိတ်ခေါ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်. ဤအနှင့်အတူခရီးသွားနေချိန်မှာပိုက်ဆံ Save 10 အပေါ်အကြံပေးချက်များ သင်၏နောက်အားလပ်ရက်နှင့်သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါလိမ့်မယ်.
အဖျား 1: တစ်ဦးကရေခဲသေတ္တာပြီးတော့တစ်ဦးကမိုက်ခရိုဝေ့ဒါမှမဟုတ်မီးဖိုချောင်ဧရိယာနှင့်အတူစာအုပ်တစ်ဦးကအခန်း
တချို့လူတွေပေါ်နေချိန်တွင်ချက်ပြုတ်လိုမဟုတ်ပေမဲ့ အားလပ်ရက်, '' အိမ်က '' မှာမယ့်တဦးတည်းမုန့်ညက်တစျနေ့စာစားခြင်းသင်ကပုံးတစ်ပုံးကိုကယ်တင်နိုင်. အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးအပေါ်စီးကော်ဖီခွက်ရှိခြင်းမမွေ့ အသစ်ကဦးတည်ရာကို အဆိုပါအရူးအခန်းဝန်ဆောင်မှုအခကြေးငွေမပါဘဲ? အဲဒီအစားနံနက်စာနှင့်နေ့လည်စာစားဘို့အတွက်ကိုစားပြီးတော့တစ်ဖန်စီညစာအပေါ် splurge. တစ်ဦးကခရိုဝေ့ဖ်နှင့်ရေခဲသေတ္တာလည်းစားကြွင်းစားကျန် reheating များအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မည်!
အဖျား 2: သင်ကစာအုပ်ခင်မှာ, ဖြစ် သငျသညျနေကြဘယ်မှာ၏တည်နေရာသတိထား
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလျင်မြန်စွာတက် add နိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်ကဗဟိုတည်နေရာအတွက်နေဖို့လိုပေမည်. ဘွတ်ကင် ဝေးရဲ့နေရာတစ်နေရာစျေးနှုန်းချိုသာထင်ရစေခြင်းငှါသင်တို့မူကားစာသားနောက်ပိုင်းတွင်ထိုသို့ပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်. အကောင်းဆုံးကတော့, သင့်ထံမှနေရာတိုင်းလမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ်တစ်နေရာရာမှာစာအုပ်ဆိုင်. မသာသင်နေတမြို့လုံးပိုမိုတွေ့မြင်ရလိမ့်မယ်, သင်မူကားလည်းပါလိမ့်မယ် ခရီးသွားလာစဉ်ပိုက်ဆံကယ်တင်.
အဖျား 3: ခရီးသွားနေစဉ်ငွေကို Save ရန်စီးတီးခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းကဒ်များသည်ကိုကြည့်ရှု
ကဒ်ပေါ် မူတည်., သငျသညျထိပ်တန်းဧည့်သည်ဆွဲဆောင်မှုအခမဲ့ entry ကိုရရှိနိုငျ, အထူးလျှော့စျေးမှာ စားသောက်ဆိုင် နှင့် စျေးဆိုင်, အလုပ်များမှာ skip-The-line ကိုရှေးခယျြစရာ ဆွဲဆောင်မှု, အခမဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ပင်အခမဲ့လမ်းညွှန်စာအုပ်လေးတွေနဲ့. သင့်ရဲ့ပေါ် မူတည်. ခရီးစဉ်, ကပိုက်ဆံရကျိုးနပ်ပါလိမ့်မယ်.
အဖျား 4: အကောင်းဆုံး ROOM တွင် Get မနေပါနဲ့
သင်အမှန်တကယ်သင့်ရဲ့အခန်းတစ်ခန်းအတွင်းမှဖြုန်းဖို့အချိန်ဘယ်လောက်သွားကြသည်? သင်ရုံရှိသေးအိပ်ပျော်နေသောပါလိမ့်မည်? သင်တစ်ဦးနှင့်အတူအခန်းလိုအပ်ပါသလား ကောင်းသောအမြင် သို့မဟုတ်ဤမျှလောက်အပိုအာကာသ? သင်သာယာအဆင်ပြေမှုများကိုသုံးပါလိမ့်မယ်, ထိုကဲ့သို့သောရေကူးကန်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကြံ့ခိုင်ရေးအခန်းတစ်ခန်းအဖြစ်? ရဲ့ရိုးသားဖြစ်စို့, အားလပ်ရက်များမထိုက်မတန်ရတဲ့အကြောင်းကိုမဟုတ်ပါဘူး! ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အခန်းကိုစမတ်ဘွတ်ကင်များနှင့်ခရီးသွားလာစဉ်ပိုက်ဆံကယ်တင်.
အဖျား 5: ပိုနည်းနေရာများခုနှစ်တွင်ပိုအချိန်ဖြုန်းပြီးတော့သင်ကနယ်လှည့်နေစဉ်ငွေကို Save မူမည်
ကျနော်တို့နှေးကွေးခရီးသွား LOVE. တကယ်တော့, ပိုပြီးတိတိကျကျ ... ကျွန်တော်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောခရီးသွားကိုချစ်. အဲဒီအစားတစ်ဦး၏တဦးတည်းအဆုံးကနေပြိုင်ကားများ အခြားမှတိုင်းပြည်, သို့မဟုတ်တဆင့်ဖြတ်6နိုင်ငံများရှိ6ရက်သတ္တပတ်, သင်၌ရှိကြဒေသတွင်းသိရန်ရ, ကောင်းစွာ. ရထားယူပြီး ဒီလိုလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်, သငျသညျသှားသကဲ့သို့သငျအပေါငျးတို့သက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်မြင်ကွင်းများအတွက်ယူအချိန်ရှိသည်အဖြစ်. လွယ်ကူသောကြောင့်ယူပြီး၏ဝမ်းမြောက်အပြင်, ဆောင်ရွက်ခြင်း သိပ်အများကြီးလေယာဉ်ခရီးစဉ်, ဘတ်စ်ကားခရီးစဉ်, နှင့်မောင်းနှင် ရှည်လျားသောအကွာအဝေး တကယ်ကသင်၏ဘတ်ဂျက်သို့စားနိုင်. ဒါကြောင့်နှေးကွေး, ပိုမိုယူ, အားလုံးအေးမြအခမဲ့ပစ္စည်းပစ္စယရှာဖွေတွေ့ရှိ.
အဖျား 6: လူမှုမီဒီယာတွင် Follow
အားဖြင့်ခရီးသွားလာစဉ်ပိုက်ဆံ Save "အကြိုက်"သင်အကြိုက်ဆုံး ခရီးသွားလာဆိုဒ်များအပေါ် Facebook နှင့် Twitter တွင်သူတို့ကို "လိုက်နာ". ခရီးသွားကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏လူမှုမီဒီယာလမ်းကြောင်းများမှတဆင့်တိုက်ရိုက်ပူအပေးအယူလွှတ်ဘို့အဒါဟာပိုပြီးအဖြစ်များရတဲ့င့်.
အဖျား 7: သတင်းလွှာအပေးအယူများ
မဆိုပေးထားသောအချိန်ကာလအဘို့ကျော့ကွင်းကိုအပေါ်မရရှိနိုင်ပါကလက်ရှိအပေးအယူများစာရင်းကိုထုတ်လုပ်ကြောင်းအနည်းငယ်သတင်းလွှာပေးသွင်းပြီး Get. ခရီးသွားလာနေစဉ်ဒီနေရာမှာပိုက်ဆံကယ်ဖို့သတင်းလွှာဘို့ငါတို့လက်ရှိရွေးချယ်မှုများမှာ:
ခရီးသွားတိရစ္ဆာန်ရုံ - သူတို့ရဲ့ထိပ်တန်း၏အပတ်စဉ်အခမဲ့သတင်းလွှာမှ Subscribe 20 အပေးအယူ - ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများအဘို့အ edition မှာ.
သဘောတူညီချက်အခြေစိုက်စခန်း - သူတို့၏အခမဲ့သဘောတူညီချက်အတွက်သတိပေးချက်များကိုရယူပါ. သူတို့ဟာ unadvertised ရောင်းအားနှင့်အတူအပေးအယူရှိသည်နှင့်ကမ်းလှမ်းသင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုတခြားကိုရှာဖွေမည်မဟုတ်.
စိန့် Moritz ရထားမှ Lyon လေဆိပ်
အဖျား 8: တစ်ခုကတိုက်ခန်းငှားရမ်း
တိုက်ခန်းများ BOMB ဖြစ်ကြသည် မိသားစုများအတွက် သင်တို့အပေါ်မှာကယ်တင်နိုင်အောင်အပိုလူနေမှုအာကာသနှင့်မီးဖိုချောင်ရှာနေသို့မဟုတ်ရှိသူများ အစာ. Airbnb ဖြစ် ဒေသခံများထံမှစျေးပေါသောအားလပ်ရက်ငှားရမ်းခများနှင့်ငှားရမ်းခများရရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် 180 နိုင်ငံပေါင်း.
ပဲရစ် Reims ရထားမှ
အဖျား 9: အနိမျ့ရာသီခုနှစ်တွင်ခရီးသွား
သငျသညျနိုင်ဖြစ်ခြင်း၏ဇိမ်ခံရှိပါက အထွတ်အထိပ်ရာသီခရီးသွားရှောင်ရှား, ကဖမ်းပြီး! စျေးနှုန်းများကျောင်းအားလပ်ရက်ကာလအတွင်းသိသိသာသာတက်ခုန်. ထိုသို့ရုံမဟုတ်ဘူး နွေရာသီ သငျသညျကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ် - ကြောင်းမမေ့မလြော့ပါ အီစတာပှဲတျော, ခရစ္စမတ် ထိုသူနှစ်ယောက်ဝက်သက်တမ်း အားလပ်ရက် ဒါ့အပြင်ပိုပြီးဖြစ်များပါတယ် စျေးကြီး. ရာသီထဲကခရီးသွားလာဆိုလိုပါလိမ့်မယ် စျေးနှုန်းချိုသာရထားလက်မှတ်တွေ နည်းအလုပ်များနေရာများ - ပိုက်ဆံကယ်ဖို့တစ် Win-Win ခွအေနကေိုခရီးသွားလာနေစဉ်!
လိုင်ယွန်လေဆိပ်မှ Provence ရထားများ
နောက်ဆုံးတဦးတည်း: ခရီးသွားနေစဉ်ငွေကို Save ရန်အတွက်အခမဲ့ Wi-Fi သီးသန့်ထဲကကိုရှာ
အခမဲ့ Wi-Fi သီးသန့် Find စာကြည့်တိုက်နှင့် ကဖေး, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဒေတာကိုရိုက်မရ. ပြီးလျှင်ခင်ဗျား phoning ကရှိနေတုန်းပဲမိုးရွာမယ့်လျှင်ထွက်ရှာတွေ့မှအိမ်ပြန်, ထိုကဲ့သို့သော Skype ကိုသို့မဟုတ် Google အဖြစ်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုသုံးစွဲဖို့မမေ့မလြော့ပါ!
ခရီးသွားနေစဉ်ကျနော်တို့ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်ငွေကိုကူညီပါခဲ့ပါ?
အကြှနျုပျတို့သညျကိုကူညီပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုသိပါစေ ဤအနှင့်အတူခရီးသွားနေချိန်မှာပိုက်ဆံကယ်တင် 10 အကြံပေးချက်များ. ကျနော်တို့သိရန်ကိုချစ်ချင်ပါတယ်! အချိန်အတောအတွင်း, ခရီးကယ်ရထားမှအကောင်းဆုံးအပေးအယူအပေါ်ရထားလက္မွတ္မ်ား. အဘယ်သူမျှမက Hidden အခကြေးငွေ, အဘယ်သူမျှမပျော့သွားတာကို! ရုံရထားခရီးသွား!
သင်တို့သည်ဤအတူအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား 10 ခရီးသွားလာစဉ်ပိုက်ဆံကယ်ဖို့အကြံပေးချက်များ? စာအုပ် သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေ ယခုနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်ခရီးသွား၏ဂုဏ်အသရေများကသုတ်သင်ပယ်ရှင်းသည်ကိုခံရပါစေ!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “10 ခရီးသွားနေစဉ်ငွေကို Save ရန်သိကောင်းစရာများ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-save-money-traveling%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
မြတ်နိုး europetravel ငွေကွေး မင်းချစ်သူ ရထားအကြံပေးချက်များ traveltips